Zimbabwe offers to pay for Tsvangirai funeral expenses - Channel NewsAsia
Zimbabwe is ready to help foot the bill for the funeral arrangements of Morgan Tsvangirai in a tribute to the opposition leader who died after a long battle with cancer, a government spokesman said on Thursday.
FILE PHOTO: Opposition Movement for Democratic Change leader Morgan Tsvangirai addresses a crowd gathered outside parliament in Harare, Zimbabwe, November 21, 2017. REUTERS/Mike Hutchings/File Photo
15 Feb 2018 04:45PM
HARARE: Zimbabwe is ready to help foot the bill for the funeral arrangements of Morgan Tsvangirai in a tribute to the opposition leader who died after a long battle with cancer, a government spokesman said on Thursday.
Tsvangirai's death on Wednesday in a South African hospital cast his Movement for Democratic Change party into unknown territory less than three months after the army ousted Zimbabwe's veteran ruler Robert Mugabe.
Arguably Zimbabwe's most popular politician, Tsvangirai's career was ultimately defined by his tussles - bother literal and figurative - with 93-year-old Mugabe, who resigned after a de facto coup in December.
"The Zimbabwean Embassy in Pretoria has been instructed to help in any way appropriate in the circumstances, including assuming the costs that are attendant to the proper handling of the body of the late (Tsvangirai)," said George Charamba, who is also the presidential spokesman.
Zimbabwe's new president, Emmerson Mnangagwa, has made no public statement yet on the former trade union leader's death but postponed a trip to Bulawayo in the south of Zimbabwe due to other "pressing commitments", the state-owned Herald newspaper said.
Elections are due within the next six months in Zimbabwe and Tsvangirai's illness and now death leaves his party in disarray, to the advantage of the ruling ZANU-PF party, now led by Mnangagwa, Mugabe's former deputy.
(Reporting by Alfonce Mbizwo; Writing by Tiisetso Motsoeneng; Editing by Gareth Jones)